Daty.fm — maimaim-Poana ny Lahatsary amin’ny Chat Mampiaraka, izao Tontolo izao ny Lahatsary amin’ny Chat Mampiaraka Fampiharana eo amin’ny App Store
Asongadina ao ETAZONIA Amin’izao fotoana izao, TechCrunch, ny BBC, ny CNN Vola, Gigamon, Heroku, colocalize, Teboka FM, sy ny Openwork. Jereo ny lahatsary ao amin’ny daty.fm Daty.fm dia new app fa rethinks sy manamora ny fomba ny olona hihaona an-tserasera. Be dia be ny olona tsy dia te hiezaka ny fiarahana amin’ny aterineto, ary isika dia aza t manome tsiny azy ireo. Dry zareo hoe fomba maro loatra ny fanontaniana manokana, avy eo izy ireo hizara izany vaovao izany miaraka amin’ny bunch ny vahiny, ary izy ireo matetika lany vola. Daty.fm manontany roa tena fototra fanontaniana, ary mahita anao mety mifanaraka. Izany dia mampiseho anao ny sary miaraka amin’ny mpampiasa tsirairay ny taona sy ny ankapobeny-toerana, ary ianao, tia na tsy tia azy ireo. Raha toa ka tsy mahita na inona na inona ho valiny, na tsy nahita na iza na tianao na izany aza, aza matahotra: Hatramin’izao.fm dia handefa anareo ny hanosika ny fampahafantarana raha vao olona vaovao tonga ho anao. Raha misy olona tia anao koa tia anao, ianao hahazo ny indray mipi-maso manosika fampahafantarana fa ianao efa nahazo ny lalao. Ankehitriny, dia afaka mikaroka ao amin’ny ny karajia tab, ary manomboka tsy miankina resaka niaraka tamin’izy ireo amin’ny alalan’ny lahatsary amin’ny chat na ny andinin-chat. Inona no lehibe dia ny hoe izany no tanteraka misaraka avy ny media sosialy hafa, mailaka, na kaonty hafa, ka tsy ho foana ny toerana azo antoka ny mifandray amin’ireo olona vaovao. Handeha aho mba hijery raha toa fampiharana ity no tena izy. Raha mahita ny hafa sandoka ny olona ao dia misy aza ny lehilahy izay manorisory hafatra, izaho tsy hampiasa izany intsony. Tsy misy fandikan-dalàna, raha te-hanao izany dia tsara kokoa, dia tsy maintsy hanaloka azy mba hisarihana bebe kokoa ny daty.
Handeha aho mba hijery raha toa fampiharana ity no tena izy. Raha mahita ny hafa sandoka ny olona ao dia misy aza ny lehilahy izay manorisory hafatra, izaho tsy hampiasa izany intsony. Tsy misy fandikan-dalàna, raha te-hanao izany dia tsara kokoa, dia tsy maintsy hanaloka azy mba hisarihana bebe kokoa ny daty.
Fa s rehetra tiako
Izaho dia vehivavy miray amin’ny vehivavy izay ihany no tia ny olona izay manana ny dicks ao amin’ny mombamomba azy ireo ny sary. Tsy afaka manakana azy. Foana aho handeha amin’ny misy sy marina flagging dick pics izay miseho ary na inona na inona no mbola atao momba izany. Afa-tsy hiaraka raha toa ianao indray ho mandehandeha alalan’ny bunch ny dicks.
TSY pelaka ny namana
Ny lahatsary amin’ny Chat BFF — Tsosialy-Tsoratra mpitondra Hafatra mba Hifanaraka Mahitsy, Pelaka, Vavy tokan-tena tsy lavitra teo ho FaceTime, Skype, Kik Account antso
← Ny fivorian'ny - Ny toerana tsara indrindra italiana Mampiaraka